के हो ? बालबालिकामा लाग्ने 'आइटिएस' रोग | Jukson
के हो ? बालबालिकामा लाग्ने 'आइटिएस' रोग
डा. धर्मागत भट्टराई
अल्पविकसित र अभावग्रस्त क्षेत्रमा सहि ढंगले पोषण नदिँदा बालबालिकालाई इन्फेन्टाइल ट्रेमर सिन्ड्रोम( आइटिएस) रोग लाग्ने गर्दछ । यो रोग विकसित देशमा खासै देखिदैन। विकासोन्मुख देशको ग्रामिण, अव्यवस्थित क्षेत्र र झुपडीमा बस्ने थुप्रै बालबालिकामा यो रोग लाग्छ ।
विस्तारै कुपोषणको प्रभावले देखिने यो रोग ८ देखि ९ महिनाको उमेरबाट शुरु भई डेढ २ वर्षसम्मको बालबालिकामा बढी देखिन्छ। समयाक्रमसँगै मानसिक परिर्वतन, अन्तरक्रिया वाक्यशक्तिमा कमी, जोर्नी नजिकका भाग कालो हुनु र औंला, हात टाउँकोमै मन्द कम्पन देखिन्छ। आइटिएसको ठ्याक्कै कारण पत्ता नलागेपनि कुपोषण तथा भाइरल संक्रमणपछिका अवस्थामा बढी पाइएको छ।
समग्र कुपोषण त छदैछ, त्यसबाहेक भिटामिन बी १२, म्याग्नेसियम, जिङ्क र बी १ को कमी तथा भाइरल संक्रमण एवं ‘टाएरोसिन’ प्रोटिन टुक्रिने शारीरिक क्रियाका गड्बढीमा यो सिन्ट्रोम हुनेगर्छ।
यो रोग लागेपछि बच्चाको गाला पुक्क हुन्छ, कपालको रौं मसिनो, खुईलिएको खैरो वा झरिसकेको हुन्छ, हातखुट्टा साबिकको भन्दा बढी कालो भएको हुन्छ। बालबालिका धेरै नखेल्ने, अन्तक्र्रिया नगर्ने, टोलाउने, चिनेका मान्छे र वतावरणसित हेलमेल हुन नखोज्ने हुन्छ।
बालबालिकामा रक्तअल्पता, पखाला, सुन्निने, आैँलाहरु काप्ने, र पछि स्वर ननिस्कने हुन सक्छ। हट्ने क्रममा रक्तअल्पता र कालोपन हट्दै जान्छ भने मानसिक सुस्तताको समस्या लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ।
बालबालिका यो रोगले मरिहाल्ने नभएपनि मानसिक सुस्तता,बौद्धिक ह्रास, सामाजिक अन्तक्र्रियामा कमी, सिकाउन कठीनता, बुद्धिमा ह्रास आउने दीर्घकालीन समस्या देखिन सक्छन्।
प्रयोगशालामा जाँच गर्दा हेमोग्लोविन। भिटामीन बी १२, बी १, म्याग्नेसियम, जिंक अनि संक्रमणका लक्षणहरु भेटिन्छन् । दिमागको पानी (सीएसएफ) सही भएपनि दिमागको कोषमा सुजन आएको देख्न सकिन्छ।
सीटी स्क्यानमा मगजको गुदीभाग चाउरिएको देख्न सकिन्छ। इइजीमा छारेरोगका जस्तै इपिलेप्टिफर्म तरङ्गहरु देख्न सकिन्छ।
यो रोग भनिहाल्नुपहिले यो जस्तै देखिने अरु सिन्इमहरु जस्तै कलेजोको दिर्घरोग, म्यागनेसियमको कमी, औषधीसेवन, थाइराइडका समस्या, मेगालोव्लाीस्टक एनिमिया आदि छैन्न भनी प्रमाणित गरिनु जरुरी छ।
यो रोगको उपचार खास सपोर्टिभ थेरापीमात्रै हो। कमीहरुको पूर्ति गर्न म्याग्नेसियम, जिंक, भिटामिन बी १२,बी १, बी ६ र क्याल्सियमहरु सुरु गरिहान्नुपर्छ। धेरै नै काँप्ने गरेको देखिएमा “प्रोप्रानोलोल” भन्ने औषधी विशेषज्ञबाट चलाउन पनि सकिन्छ।
यसमा छारेरोग र पाकिन्सोनिज्मका औषधीको केही भूमिका छैन। बरु सन्तुलित आहारमा ध्यान दिनु जररी छ। यसको रोकथामका लागि ६ महिनापछि आमाको दुधवाहेकको खानेकुरामा पनि ध्यान दिई खानाको मात्रा बढाउँदै जानुपर्छ।
त्यसपछि समय समयमा पनि स्तनपान कै भरोसामा बालबालिकालाई अरु खानामा अभ्यस्त नगराए आइटिएस हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यसकालाई परिवारमा बाबु आमाबाट बच्चाको स्याहारको साथै समाज र राष्ट्रबाट गरिबी, कुपोषण र अज्ञानता घटाउनेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
कन्सल्टेन्ट (पेडीएट्रिस एण्डएडलोसेन्ट)
बाल तथा किशोर स्वास्थ्य विज्ञ
काठमाडौंमा एक रात
मैले किन नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरें ? बाबुरामले नेतृत्व हत्याउन खोजेको टिप्पणीबाट दुखी छु
‘तान्यो मलाइ तान्यो ’को कभर भिडियोमा १ लाख ५ हजार पुरस्कार
हरितालिका तीज : हिन्दु महिलाहरूको महान चाड
इक्यान शैक्षिक मेलाका सम्पूर्ण स्टल बुकिङ
फिल्म क्षेत्रमा आशालाग्दो ६ नयाँ अनुहार